नेपाली युवाले बनाए 'स्मार्ट इलेक्ट्रिक ह्विल चेयर'
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट धेरै नेपाली शारीरिक रूपमा अशक्त र अपांग बने । उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउन इन्फिनिटी ल्याबका पाँच युवाले प्रविधिमा आधारित स्मार्ट इलेक्ट्रिक ह्विल चेयरको विकास गरेका छन् । यसले धेरैको जीवन सहज बनाएको छ । पाँच जुझारु युवा सन्तोषराज न्यौपाने, सुनी परियार, मेनसन लाखेमरु, प्रजेश श्रेष्ठ र भरत श्रेष्ठको टिमले विकास गरेको यो प्रविधिले धेरैलाई आकर्षित गरेको छ । स्मार्ट इलेक्ट्रिक ह्विल चेयर बनाउन इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर फर डिसएबिलिटी सेन्टर (सीआईएल)ले सहयोग गरेको छ । सीआईएल ह्विल चेयर प्रयोग गर्ने फरक क्षमता ...
एनसेल लाभकर छली प्रकरण : पहिलेका बिक्रीमा पनि कर छली !
कार्यालयले एनसेल बिक्रीमा पहिलेका प्रकरण ब्युताउँदै कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयको बिक्रीमा कर छलीको विषय सतहमा आएपछि अघिल्ला प्रकरण पनि कार्यालयले खोतल्न थालेको हो । हालसम्म १२ पटक किनबेच भइसकेको एनसेलमा विगतमा पनि कर छली भएको आशंका गरिएको हो । कर कार्यालय स्रोतका अनुसार १०औं र ११औं पटकको बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी कर छलीका सम्भावित अंकसहित निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘एक सातामा लगातार दुईपटक २०६८ चैत ७ र १६ गते एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो बिक्रीमा ...
बच्नुहोस् इमेल लेख्दा गरिने यी १० गल्तीबाट
अहिलेको समयमा इमेल अकाउन्ट नहुनेहरु कमै होलान् । अझ, प्रोफेसनल लाइफमा त इमेल नचलाई सुखै हुँदैन । इमेल पठाउनु कुनै गाह्रो काम त होइन, तैपनि यसमा सावधानी अपनाउनुपर्ने केही कुराहरु छन् । यी कुराहरुलाई विचार नपुर्‍याए इमेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिको तपाईंप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ । आउनुस, यसबारे १० वटा बुँदामा चर्चा गरौं । १. बेअर्थि इमेल नपठाउनुस इमेल गर्नका लागि कुनै प्रयोजन हुनैपर्छ । तपाईंले कुनै महत्वपूर्ण सूचना वा सन्देश दिन चाहेको, कुनै कुराको अपडेट गराउन खोजेको वा कसैको आग्रहलाई जवाफ दिएको हुनुपर्छ । तपाईं कुनै प्रयोजनबिना ...
इन्टरनेट सेवालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले नयाँ कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा नयाँ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)लाई हालै सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले झापाको पाथीभरा नेटवर्क, गोरखाको हिमालयन गोर्खा नेट, काठमाडौंका सिटी नेट, प्राइम नेट र केसीएन नेटलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यी कम्पनीले गत जेठदेखि नै आवेदन दिएको भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउँदा ढिलो भएको र प्राधिकरणले पनि एकैपटक पाँचवटैको निर्णय गरेको उनको भनाइ ...
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको मासिक डाटा खपत लगभग २३ लाख जिबी पुगेको छ । चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा (फोरजी) को सुरुवातसँगै डाटा खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाको सन् २०१७ को दोस्रो त्रैमासिकको तथ्यांक अनुसार कुल डाटा उपगोग ६८ लाख जिबी पुगेको उल्लेख गरेको छ । तीन महिनामा प्रयोग भएको ६८ लाख जिबीलाई प्रतिमहिनामा निकाल्दा २२.६६ लाख जिबी हुन आउँछ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा डाटाको आयमा १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । गत ...
एप्पलले नयाँ फोन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । एप्पलले आइफोन १० सहित आइफोन ८ र ८ प्लस बजारमा ल्याएको हो । पहिलो आइफोन सार्वजनिक भएको १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यसले प्रयोगकर्तालाई ‘सप्राइज’ दिँदै आइफोन एक्स अर्थात् टेन सार्वजनिक गरेको छ । अब एप्पलले आइफोन ९ नल्याउने भएको अनुमान गरिएको छ । एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आयोजित समारोहमा नयाँ फोन सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले आइफोन ८ र ८ प्लसलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट फोन र आइफोन टेनलाई भविष्यको प्रविधि बताए । त्यस्तै आइवाच ...
एप्पलका चार प्रोडक्ट एक साथ
क्यालिफोर्निया – विश्वकै प्रख्यात ब्रान्ड एप्पलले एक भव्य समारोहको आयोजना गरी आइफोन ८ र ८ प्लस , एप्पल वाच र फोरके एप्पल टिभी सार्वजनिक गरेको छ। आइफोन सेभेन पड्किएको गुनासा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूबाट आउन थालेपछि त्यसमा भएको कमजोरीहरूलाई समेत हटाई आइफोन एट र एट प्लस सार्वजनिक गरिएको दाबी एप्पल कम्पनीको छ। आइफोन एट र एट प्लस आइफोन सेभेन र सेभेन प्लसको अपडेट रूप हुन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया रहेको स्टिभ जब्स अडिटोरियम एक भब्य समारोहको आयोजना गरी आइफोन एट र एट प्लस सार्वजनिक गरिएको हो। ...
विश्वकै प्रख्यात ब्रान्ड एप्पलले एक भव्य समारोहको आयोजना गरी आइफोन ८ र ८ प्लस , एप्पल वाच र फोरके एप्पल टिभी सार्वजनिक गरेको छ। आइफोन सेभेन पड्किएको गुनासा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूबाट आउन थालेपछि त्यसमा भएको कमजोरीहरूलाई समेत हटाई आइफोन एट र एट प्लस सार्वजनिक गरिएको दाबी एप्पल कम्पनीको छ। आइफोन एट र एट प्लस आइफोन सेभेन र सेभेन प्लसको अपडेट रूप हुन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया रहेको स्टिभ जब्स अडिटोरियम एक भब्य समारोहको आयोजना गरी आइफोन एट र एट प्लस सार्वजनिक गरिएको हो। आइफोन एटमा होम ...
भदौ २७ – विश्वकै प्रख्यात ब्रान्ड एप्पलले आइफोन एट सार्वजनिक गरेको छ। आइफोन सेभेन पड्किएको गुनासा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूबाट आउन थालेपछि त्यसमा भएको कमजोरीहरूलाई समेत हटाई थप विशेषता सहित एप्पलले आइफोन एट ल्याएको हो। आइफोन एटको लन्चका लागि एप्पल कम्पनीले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया रहेको स्टिभ जब्स अडिटोरियम एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। आइफोन एटमा होम बटनको ठाँउमा एज टु एज बटन, फेसियल रिकग्नाइजेसन ,एलइडी डिस्प्ले र ताररहित चार्जिङको सुविधा रहने दाबी एप्पलको छ। यसमा दुई क्यामरा १२८ र १२६ इन्टरनल स्टोरेज भेरियन्ट तथा टच आईडी , फेस स्क्यानिङ लगायतको ...
एप्पलको बहुप्रतिक्षीत आइफोन एट अन्ततः आज सार्वजनिक हुँदैछ । एप्पलले एक भव्य समारोहबीच आइफोन एट सार्वजनिक गर्दैछ । आइफोन एट लञ्च हुनुअघि नै यसका केही दमदार फिचर्सहरुका बारेमा जानकारीहरु लिक भइसकेका छन् । आइफोन एटका सम्भावित फिचर्स यी हुन्: · अगमेन्टेड रियालिटी: एप्पलले आफ्नो आइओएस ११ मा अगमेन्टेड रियालिटी (ए आर) ल्याउने घोषणा गरेको छ । सोही कारणले एप्पलका डेभलपर्सले आइफोन एटका लागि पनि एप्स बनाउन सक्नेछन् । फोन बजारमा आउने बेलासम्ममा यो फिचर तयार भैसक्ने विश्वास गरिएको छ । · डुअल ब्याक क्यामरा: यद्यपि यसबारेमा एप्पलले ...
‘आइफोन एक्स’ लन्च गर्दै एप्पल, सत्य सावित होला अफवाहहरु ?
एप्पलले आइफोन ल्याएको १० वर्ष पुरा भएको छ । दशौ वाषिर्कोत्सवका अवसरमा आज आइफोनको परिस्कृत भर्सन ‘आइफोन एक्स’ र अन्य मोडलहरु सार्वजनिक गर्दैछ । आइफोन एक्समा थुप्रै आधुनिक फिचरहरु समावेश गरिएको बताइन्छ । तर, यसको लन्चभन्दा अगावै हरेक महिना कुनै न कुनै अफवाह आइरहेका छन् । एप्पले पहिलोचाटि आफ्नो तीन फोन लन्च गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसमा आइफोन एक्ससँगै आइफोन ७ र आइफोन ७ प्लसको अपग्रेड भर्सन हुनेछन् । यसलाई आइफोन ८ र आइफोन ८ प्लस नाम दिइएको छ । आइफोन ८ लाई लिएर लामो समयदेखिको ...
बहुप्रतिक्षित आइफोन ८ आज (मंगलवार) सार्वजनिक हुँदै छ । जसको प्रतिक्षामा हजारौं ग्राहकहरु लामो समय देखि रहँदै आएका छन् ।कम्पनीले आज तीन मोडलका आइफोनहरु सार्वजनिक गर्ने जानकारीहरु बाहिर आएका छन् । जसमा आइफोन ८, आइफोन ८ प्लस र आइफोन एक्स रहेका छन् । नयाँ विशेषताहरुको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा आइफोन ८ र ८ प्लसमा एलईडी डिस्प्ले प्रयोग गरिने छ भने आइफोन एक्समा बेजेललेस ओएलईडी डिस्प्ले राखिनेछ । एप्पलले आफ्नो १० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर विशेष फोनको रुपमा आइफोन एक्स ल्याउन लागेको हो ...
आज आइफोन ८ सार्वजनिक हुँदै
भदौ २७ - विश्वकै लोकप्रिय ब्रान्ड एप्पलले आज एक भब्य समारोहकाबीच आइफोन ८ सार्वजनिक गर्दैछ। आइफोन ७ पड्किएको गुनासा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूबाट आउन थालेपछि त्यसमा भएको कमजोरीलाई सुधार गर्दै आइफोन ८ बजारमा ल्याउन लागेको एप्पल कम्पनीले जनाएको छ। आइफोन ८ लन्चका लागि एप्पल कम्पनीले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया रहेको स्टिभ जब्स अडिटोरियममा एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताएको छ। उक्त समारोहमा आइफोन ८लन्चका लागि एप्पल कम्पनीले प्रेस क्षेत्रलाई समेत निमन्त्रणा दिएको छ। आइफोन ८ मा भएको विशेष प्रविधिको सहायताले यसबाट मानिसको अनुहारसमेत पहिचान गर्न सकिने छ। उक्त समारोहमा विभिन्न मोडलका अन्य ...
माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरले अब आफ्ना प्रयोगकर्तालाई मोबाइल एपमार्फत नै ट्वीटर अकाउन्ट शेयर गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अब ट्वीटरको मोबाइल एपबाटै प्रयोगकर्ताले पासवर्ड शेयर नगरिकनै ट्वीटर अकाउन्टमा पहुँचको साझेदारी गर्न सक्नेछन् । यो फिचरलाई ट्वीटर डेक टिम्स भनिन्छ । योसँगै एउटै मोबाइल एपमार्फत धेरैवटा ट्वीटर अकाउन्ट खोल्न सहज भएको छ र यसले खासगरी बिजनेस र ब्राण्डहरुका ट्वीटर अकाउन्ट चलाउनेहरुलाई एउटै एपबाटै विभिन्न अकाउन्टमा अपडेट पोष्ट गर्न, रिप्लाई हेर्न, डिएम गर्न लगायतमा सहजता हुनेछ । ट्वीटरको ट्विटडेक युनिटका अनुसार यो पासवर्ड शेयर ...
मुलुककै जेठो प्राविधिक विद्यालयको नाम दर्ज गर्न सक्षम कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको उत्तम थलो मानिँदै आएको छ । विसं २०३७ मा स्थापित यो प्राविधिक शिक्षालयले राज्यले निकै दुर्गम मानेको हिमाली जिल्ला जुम्लाबाट मुलुकलाई दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म यसले राज्यलाई झण्डै चार हजार प्राविधिक जनशक्ति प्रदान गरेको शिक्षालय प्रमुख राजकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिमा दुई हजार ६०० पुरुष र एक हजार ३०० महिला रहेको उहाँले बताउनुभयो । सिटिइभिटीको अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै शिक्षालय प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “कर्णाली प्राविधिक ...
गरिरहेको आणविक हतियार तथा क्षेप्यास्त्र परिक्षणको विषयलाई लिएर अमेरिकाले उत्तरमाथि नाकाबन्दी प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा युट्युबले उत्तर कोरियाबाट संचालित च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक हतियार तथा क्षेप्यास्त्र परिक्षणको भिडियो प्रसारण गर्ने र नेता किम जोङ उनको प्रशंसा गर्ने उरीमिनोजोक्किरी नामक च्यानल बन्द गरिएको शनिबार पुष्टि भएको छ । यु ट्युबको सामुदायिक दिशा निर्देश उल्लंघन गरेको भन्दै सो एकाउन्ट बन्द गरिएको भिडियो शेयरिङ वेबसाइटले जनाएको छ । यु ट्युबले कुनै निश्चित एकाउन्टहरु किन र कहिलेसम्मका लागि बन्द हुन्छन् भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन ...